बाह्र सत्ताईस अभियन्ताहरू – बाह्रथरी कुरा
यी हुन् नेपालका सबैभन्दा उच्चकोटीका अभियन्ताहरू! बाहिर हेर्दा शान्त र सौम्य देखिने तर भित्रभित्रै घुसघुसे र बदलाको भावनाले ओतप्रोत । कसैले यिनको गल्ती औँल्याइदिए आफ्नो डिएम ग्रुपमा कुरो निकालेर अलि माथिल्लो लेबलका ‘हाकिम’ अभियन्तालाई बहसमा उतार्छन्! यिनको बिचार इतरका ट्विटेहरू तेसै जान्ने पल्टिने, आफूले माखो नमार्ने अरूले गरेको देखि नहसने, कामको नाममा सिन्को नभाँच्नेहरू हुन्! यिनलाई लाग्छ यी आफूहरू मात्रै यो संसारको सर्वज्ञाता र सर्वगुण सम्पन्न हुन् ! कसैले यिनको कुरा ‘अलि मिलेन कि?’ भनेर भन्यो भने मात्र पनि अरिङ्गालको गोलोसरि सबै मिलेर तेसको हुर्मत काढ्न एकतृत भैहाल्छन् ! यो खेमाका पुरुषहरू दिनभरि अनेक उपमा र ह्याशट्याग सहितका ट्विट छताछुल्ल पारेर साँझ परेसी भट्टी छिर्छन् अनि सँगै सेकुवा र ओल्ड दरबार ठेलेर अबेर राती नशामा धुत्त भएर पँएटमा मुत्दै घर पुगेसी टाईमलाईनमा दारु खाएको/ख्वाएको अडिट निकाल्छन् । यी कतिसम्म हरामखोर हुन्छन् भने पैले घाँटी जोडिएका तर आजभोलि कट्टी परेका पुराना दावँलीसँग दारुको पैसा फिर्ता माग्न पनि लाज/सरम/घिन मान्दैनन् ।
यी फेला परे भने सम्झिनुस् तपाईँको दिन बिग्र्यो! अझ त्यसमाथि तपाईँ पहाडे बाहुन हुनुहुन्छ भने त झन् छेउछाउ नै नपर्नु बेस! यिनले जयस्थिती मल्लले ल्याएको वर्णब्यवस्था हालसम्मपनि कायम रहनुमा एकल रूपमा समस्त ब्राम्हणहरुलाई दोषी देख्छन् । समाजका केही विशेष वर्ग र जात हरेक कुरामा हेपिएका, पिल्सिएका, थिचिएका, मिचिएका कुराहरू रटी रटान अन्दाजमा एकोहोरो ‘दे को देईssss’ गर्छन् र त्यसमा खस (अझ पुरुष पनि) अहङ्कारवादी समाजको भूमिका देख्छन् । दलित उत्थानको नाममा डलर भित्र्याएर वास्तविक पीडित दलितभन्दा आफ्नै उत्थानमा लागेका ट्विटेहरु यो कोटीका हुन् भनेर सम्झनु पर्दछ! अनि कि….. सर/मैडमहरु ……SSSS यिनारुसँग पंगा लिनु भन्दा साइड लाग्नु वेश।
‘दोस्रो दर्जावाली’ अभियन्ता
यो वर्गमा ट्विटरमा खाइखेलेका पुराना महिला समुदाय, जसलाई छोटकरीमा ट्विटी पनि भनिन्छ , पर्छन् भन्दा फरक नपर्ला। यिनीहरू आफ्नो आङको भैँसी देख्दैनन्, तर अरूको आङको जुम्रा केलाउन भने यिनीहरूको ‘हबी’ हो । जुन व्यवस्था आएपनि, गएपनि यिनीहरूको धन्दा उही हुन्छ, सरकारको बदख्वाइँ । के नाम….. नए बत्तलमा पुरानै छ्याङ् भनेजस्तै! यी लाग्छन्….., लागेसी कडा लाग्छन्……. र यिनमा देवी नै जाग्छिन्! पँधेर्नी शैलीको कुरा कटाइको निन्जा टेक्निकमा यी निपुण: हुन्छन् । एकअर्कालाई मेन्सेर ‘ओई डलरवाली’ भन्दै सम्बोधन गरेर एउटा मीठो चरमोत्कर्ष लिन समेत पछि नपर्ने यस्ता उच्चकोटीका अभियन्ताको लडाई सोझै सरकारसँग हुन्छ! आम ट्विटेहरुलाई यिन्ले बाल दिन्नन् भनेसी बाँकी कुरो आफैँ बुझ्नुस्! यस्ता ट्विटेका घर परिवार र आफन्तीहरुपनि यिनको महाभियानमा सामेल भएका हुन्छन्! यिनले ट्विटरमा भएको सामान्य विवादमा, अझ तेस्सै परेमा आफै निहुँ खोज्दै गएर.. अरूलाई प्रोभोक गरेर… विवाद निम्त्याएर… अन्तिममा आफ्नो र खसमको नाम / काम भजाएर बालख ट्विटेहरुलाई एक दुई दिन चिसो छिँडीको बास दिलाउने समेत ल्याकत राख्छन् । मान्छे चिन्नुस् खसी किन्नुस् हजुर! यीसंग पंगा नलिनुस्, नत्र परेको आफैँ ब्यहोर्नुस्!
यिनीहरूलाई अनेक काण्ड टिएलमा छताछुल्ल पार्न माहिर खेलाडी भन्दा पनि हुन्छ ! मेलम्ची, अण्डा , जापान लगायतका काण्ड वा अन्य यस्तै ‘सेमि रिभिल्ड’ कोड राखेर टाईमलाईनमा हल्लीखल्ली मच्चाउने अभियन्ताहरू यो समूहका मुख्य नायकहरू हुन् ! यिनीहरू टाईमलाईनमा छस्स काण्डरुपी अत्तर छर्किन्छन् अनि ‘लिङ्क पिलिच’ र ‘डिएम पिलिच’ भन्दै आउने याचनाहरू हेर्दै दङ्ग मान्दै सन्तुष्टि लिन्छन् । पैसो देख्दा महादेवको तीन नेत्र भने झैँ यस्सो सेन्सेसनल कुरो (प्राय यौन सम्बन्धित) को चर्चा हुने बित्तिकै सोझा साझा/भद्र भलादमी जस्ता लाग्नेले समेत ‘मलाई मलाई’ भन्दै तँछाडमछाड गरेको कुरा बेलाखबत मण्डपमा चिया खाँदा चर्चा गर्ने गर्छन् । ढोँगी भद्रहरूले डिएममा हात पसार्छन् भने ‘हस्त लडाकु’ (हातले हिसाब गरेर अर्बौँ जीवनको ट्वाइलेटमा नरसंहार गर्ने सिपाही) हरूले चैँ ट्यामलाइनमै झोली फैलाउँछन् ! त्यस्ता काण्डका फोटा/स्कृनसट/भिडियो चैँ यिनीहरुकले मनले खाएका साथीहरू माझ पहिले नै सर्कुलेट गरेर बल्ल टाईमलाईनमा विमोचन गर्दछन् ।
राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत अभियन्ता
यिनमा ‘परिवर्तनको मसिहा मै हो, नत्र त देश प्रयोग गरिसकेको कण्डम् जस्तै भैसक्ने थियो’ भन्ने एककिसिमको तमतमाईलो भ्रम छाएको हुन्छ! कोही विदेशका जागिर छोडेर देशलाई ठुलो गुन लाएँ भन्ने भ्रममा हुन्छन् भने कोही ‘सके हजार नसके प्रचार’ भन्दै स्व-विज्ञापनको मुतको न्यानोमा रमाएर बसेका हुन्छन्! यी अनेक ईभेन्ट म्यानेज गरे जसरी हर बखत ‘फन्ड रेजिंग’ मा लागि परेका हुन्छन् । नयाँ नयाँ दौरा सुरुवाल लाउनु, चिटिक्क परेको सुटमा ठाँटिनु र अनेक अर्ती उपदेश तथा ज्ञान बाँड्नु यिनको विशेषता हो! तर यो राष्ट्रप्रेम भन्ने कुरा कति क्षणिक मुतको न्यानो हो भन्ने कुरा ‘जय स्वाभिमान’ वाला प्रेम (बानिया) ले दखाइसकेका छन्, तेसैले धेरै बोलिरहन परेन ।
यिनको अभियान अस्थायी हुन्छ । अथवा भनौँ… सरकार ताथा आफ्नो राजनीतिक गुट अन्सार परिवर्तित भैरहन्छ ! यी शब्दका बेपारी हुन् । हरेक दिन आफ्नो पक्षको गुणगान वा अन्य खेमाको उछितो काढेर आ-आफ्नो पत्रिकामा सम्पादकीय नामको स्थायी स्तम्भमा निरन्तर…अनवरत… एकतमासले… खलाँती फुकिरहेका हुन्छन् । यी कि त आफ्ना मालिकको गेडामा तेल मालिस गरिराखेका हुन्छन्, कि दुस्मन खेमाका कसैको गेडा च्याप्न सनासो बोकी गौंडा कुरी बसेका हुन्छन्। पेसाले नै आफूलाई ‘ज्ञाता’ ठान्नेहरू यिनीहरूमा, गफ जोत्ने र अरूको कमजोरी औँल्याएर आफू ‘खोष्टे विद्वान’ पल्टिने बाहेक अन्य विषयगत वस्तुगत ज्ञानको भने खडेरी लागेको हुन्छ!
यिनको अभियान मापाको हुन्छ! यिनीहरू बाई डिफल्ट मौसमी कृषक हुन् । भन्नाले… पुस्तक वा अनुवादित कृति बजारमा ठेल्ने बेलामा यिनीहरू सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै सक्रिय रहन्छन्! हरेक मेन्सन गर्ने वा पुस्तक हातमा लिएर सेल्फी पोष्टिने पाठक/ट्विटेलाई फलेर तिनका ट्विट रिट्विट गर्दै आफ्नो कृतिको यश सामाजिक सञ्जालमा फैलाई रहेका हुन्छन्! जसै पुस्तक पुरानो हुँदै जान्छ यी पनि बिरानो बन्दै जान्छन् । यिनका लागि अघि फलो गरिएका तत्कालीन प्रिय पाठकहरू फगत एक हेन्डलमा परिणत हुन्छन् र मरेको डिंगालाई उडुसले छाडे जस्तै अन्फलो ठोकेर बस्छन् अनि अर्को पुस्तक छापिने बेलासम्म घोडा बेचेर सुत्छन् ! पाठकले दिएका कम्प्लिमेन्ट्स पढेर आफूलाई पाउलो कोएल्होको हजुरबा ठान्ने उपबुज्रुकहरु यस कोटि अन्तर्गत पर्दछन् । जाँड लागेसी टाईमलाईनमा बतासे पेलेर दुनियाँ थरी च्यालेन्ज गर्दै कुण्ठा मेट्नु यिनको दैनिकी हो!
बडो गजबका त यी हुन्छन्! यिनलाई भोक लागिरहन्छ र खाई नै रहन्छन् ! मानिलिनुस् कि यी पुतलीमा परिणत नहुने लारभा हुन् ।कुनै भोकमरीग्रस्त देशबाट आएर निःशुल्क भण्डारामा प्रवेश पाएका खन्चुवाहरू हुन्। खाना त देख्नै नहुनी…. देको देईsssss देको देईssss! अन्य कुरा तपसिलमा राखेर एका बिहानै सस्तो ग्रिन टि होस् कि महँगो मट्के टी होस फोटो हालिहाल्छन् । यिनीहरूले छुट्टी/सप्ताहान्तमा म:म डे, बिरियानी डे, थुक्पा डे, चिकेन चिल्ली डे मनाउने पनि खानको लागि भन्दा पनि फोटा देखाउनैको लागि हो । यिनीहरू रेसिपी देखि पकाउने भाँडाकुँडासम्म, सेल रोटी देखि अर्सा/अनरसा/फिनीसम्म, महँगा स्टार होटेलका लन्चदेखि डिनरसम्म, ह्विस्की देखि वाइन, रम हुँदै बियरसम्म, हरियो पर्दावाल सस्ता हुटेलका सेकुवा, छोईला, कचिला भुट्न समयबजी आदि टाईमलाईनमा पोष्टिदै अरूलाई लोभ्याउदै बस्छन् ।
ब्लोजब… आच्याsss ब्लो-अप अभियन्ता
यिनको अभियान बडो गजबको छ! क्लिभेज देखि ग्रोईनसम्मका क्लोज अप फोटो/सेल्फी हुलेर टाईमलाईनका बोकाहरूको आकर्णको केन्द्रबिन्दु भैरहनु यिनको मुख्य उद्देश्य हो! काम जेसुकै गरेर गुजारा चलाउन्….. ट्विटरमा नियमित .रूपमा अर्धनग्न तस्बिरहरू पस्केकै हान्छन् । यिनको ट्विटमा ट्विटरका भिमसिनेहरु बाउ दामी, आई लभ यु, डिएम प्लिच भन्दै कल्पनामा रमाई रहेका हुन्छन् ! यिनीहरूले पोस्ट गरेको रिट्विट गर्न नमिल्ने अलि सभ्य देखिन खोज्ने बेसोमतीहरु आफ्नो सामूहिक डिएममा यिनका ट्विट शेयर गर्छन् र सबै मिली मनको लड्डु घ्यूसँग खान्छन् ।
मान्छेका दु:ख बुझ्ने अभियन्ता
यी आफैँमा भने बहुतै दुखारी ट्विटे हुन् तर अरूको दु:ख देखेर भावुक भएको अभिनय गर्न पछि पर्दैनन्! एकै ठाउँमा टिक्न नसक्ने तर शब्दखेतीमा रमाउने, दिनभरि काममा जोतिएर दश नङ्ग्रा खियाउने अनि मौका पाएको बेला टुच्च आदर्श फलाक्ने यिनीहरूको नानी देखि कै बानी हो । यिनीहरू बाहिर हेर्दा कठोर देखिएपनि माई डियर मान्छे हुन्छन् । तिनपाने देखेसी यिनीहरूको मन मैनसरी पग्लिहाल्छ । रात परेसी टन्न कुकुरको मुत धोकेर टाईमलाईनमा उल्टी गर्छन् अनि बिहान छ्याङ्गको ह्यांगले छोडे रातीको उल्टी सोहोर्दै बस्छन्। ट्विटैपिच्छे ‘मान्छेका दु:ख नि’ भनेर लेख्दै हिँड्ने अजिबोगरिब ट्विटेहरु यो समूहमा पर्दछन् !
लिगलाईज नेपाल ह्याशट्याग सहित खुलेर लागेका एउटा काफ्ले थरीका अभियन्तालाई खुलेर वा नखुलेरै साथ दिने केही ट्विटेहरु यो वर्गमा पर्दछन् ! यिनलाई डलरसँग खासै वास्ता छैन तर केही डलर छापकहरु यिनको ट्विट देख्ने बित्तिकै रिट्विट गर्न तम्तयार भएर बसेका हुन्छन्! स्थानीय ट्यापेझै देखिने ट्विटेदेखि अलि एट्टिच्यूडवाला ट्विटेहरु तथा खुला रूपमा गाँपसे सेवन गर्छु भन्न नसक्ने, एक खिल्ली गाँजा भरेर पनि तान्न नसक्ने तर खान चैँ पर्ने ट्विटेहरु यो अभियानमा लागेको भेटिन्छ! गाँजाको फाइदा र महत्त्व बारे गरिएका रिसर्च र लेखहरू शेयर गर्नु, सरकारलाई कानुनी रूपमा गाँजा खेती गरेर/बेचेर नेपाली पैसो कालो धन् हुनबाट जोगाऊ भन्नु र अन्ततोगत्वा नेपालमा गाँजा लिगल गराउनु यिनको उद्देश्य हो! तर असाध्यै नगन्य मात्राका ट्विटेहरु यसमा छन् वा भनौ अभियानहरूमा हालसम्मकै सबैभन्दा कमजोर अभियान बोकेका अभियन्ताहरू यस कोटिमा पर्दछन्!
यो कोटीका अभियन्ताले नेपाली युवाहरूलाई णेफूली बनाउने प्रण गरेका हुन्छन् ! नेपालमा पढ्ने वातावरण छैन भन्दै विदेशका विश्वविद्यालयका लोभ लाग्दा विज्ञापन ट्विटरमा छरेर प्लस टु माथिका युवालाई विदेश पठाएर पैसो कमाउनु यिनको मुख्य ध्येय हो! संसारका कुनै पनि कुराले यिनलाई छुँदैन तर दुइटा कुरा यिनले कहिल्यै छाड्दैनन्! पहिलो विदेश पठाउने आफ्नो अफिस र विदेशको विश्वविद्यालयको प्रचार अनि दोस्रो देशविदेशमा रहेका सहरहरूमा ‘चेक इन’ । अब गुगलमै देश देशान्तर डुल्छन् कि साँच्चै नै डुलेर चेक इन गर्छन् त्यो त राम जाने !
यी भए बाह्रथरीका विभिन्न अभियन्ताहरू जस्लाई हामीले एउटा समूहमा ल्याएर अटाउने कोसिस गरेका थियौँ ! तपाईँ केमा पर्नु भो त? वा, माथि उल्लिखित नमुना अभियानका अभियन्ता तपाईँको नजरका को हुन ? तल कमेन्टमा निस्फिक्री लेख्नुहोला । हाम्ले त देखेको कुरा लेखेको हो, उनीहरूले उनीहरूको मनले खाएको कुरा गरे भने हाम्ले पनि त गर्न पाउन परो केरे हो गाँठे । मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु होला मन नपरेमा आफूलाई मन लागेको गर्नुहोला ।
र अन्तमा: यो लेखमा औँल्याइएका अभियान र विशेषताहरू ट्विटरको टाईमलाईनको ‘सतही’ अध्ययन पश्चात् वर्गीकरण गरिएका गुण एवम् दोषहरूको सँगालो हुन्! यी कुरा तपाईँमा देखिएको खण्डमा तपाईँ स्वयं नै त्यसको दोषी हुनुहुन्छ र त्यसकोलागि बाह्रथरी परिवार कुनै पनि कोणबाट जिम्मेवार रहने छैन । केही छुटेका विशेषता भए आफैँ थपेर मम: भन्न बिर्सनुहुने छैन भन्ने व्यापक आशा राखेका छौँ ।